Madaxweyne Ku-Xigeenka Oo Xadhiga Ka Jaray Mashaariic Dawladda Hoose Hirgelisay | Dhaymoole News
Madaxweyne Ku-Xigeenka Oo Xadhiga Ka Jaray Mashaariic Dawladda Hoose Hirgelisay
July 28, 2020 - Written by wariye999
Gabiley (Dhaymoole): Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta xadhiga ka jaray qaar kale-na dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo ay dawladda hoose ee degmadda Gabiley ka hirgelisay magaaladda Gabiley.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe ee xaafadda Wadda jir ee magaaladda Gabiley, iyo Xayn-daab loo dhisayo xarunta daryeelka carruurta aan waalidka lahayd ee isla magaaladda Gabiley.
Sidoo kale C/raxmaan Saylici, waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic dhawr ah oo ay dawladda hoose ee Gabiley ka hirgelisay xaafado ka tirsan magaaladda Gabiley. Kuwaasoo ay ka mid tahay Sayladda xoolaha lagu kala iibsado, Sarriibadda iyo xarunta daryeelka daryeelka Hooyadda iyo Dhalaanka.
Dhismeyaal cusub oo lagu soo kordhiyay iyo qurxin lagu sameeyay xarunta dawladda hoose ee degmadda Gabiley.
Iyadoo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku uu soo kormeeray qaybo kale oo mashaariic ah oo ka socda magaaladda Gabiley oo ay fulinayso dawladda hoose.
Waxaana weftiga madaxweyne ku-xigeenka halkaas ku soo dhaweeyay badhasaabka gobolka Gabiley C/kariin Aadan Xaaji Diiriye, maayarka Gabiley Maxamed-Aamiin Cumar Cabdi, xubno ka tirsan golaha deegaanka Gabiley iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), ayaa ku amaanay dawladda hoose ee Gabiley in ay si wanaagsan u maamuleen lacagtii cashuurta ee ay bulshadda ka qaadeen, isla markaana ay dib ugu soo celiyeen cashuurtii oo mashaariic ah.
Waxaanu sheegay in lacagtii cashuurta ahayd ee ay dadweynaha ka qaadeen dawladda hoose ee Gabiley, kadib-na ay u qaybiyeen degmadoodii iyagoo ku saleeyay meel kasta baahidda ka jirta.
Taasoo uu C/raxmaan Saylici, ku tilmaamay in ay tahay u jeedadda looga baahan yahay in ay dawladaha hoose ee dalku bulshadoodda u fuliyaan.
“Maanta, mashaariicdan aan soo kormeernay, waxay muujinaysaa in maayarka degmadda Gabiley iyo saaxiibadii (xildhibaanadda), in ay muujiyeen, in lacagtii cashuurta ahayd ee dadka ka qaadeen, in ay si wanaagsan ugu celiyeen. Oo maamulkii ay ka faa’iidaysteen ayay keeneen.
In ay cashuur badan urursadaan, ay dabadeed-na u qaybsheen degmadoodii, oo meel kastoo ka mid ah deegaanka Gabiley, ay baahidiisii u qaybiyeen, wixii ay heleen. Taasina u jeedadii loo socday ayay ahayd” ayuu yidhi Saylici.